Ajjeechaa Haacaaluu: Shakkamtoota ajjeechaa Haacaaluurratti poolisii qoratuuf manni murtii guyyoota 10 hayyame - BBC News Afaan Oromoo
Ajjeechaa Haacaaluu: Shakkamtoota ajjeechaa Haacaaluurratti poolisii qoratuuf manni murtii guyyoota 10 hayyame
18 Hagayya 2020
Manni Murtii Federaalaa Sadarkaa Jalqabaa ramaddii Araadaa ajjeechaa Artiist Haacaaluu Hundeessaan kan shakkaman Xilaahun Yaamiifi Abdii Alamaayyoo irratti poolisiif guyyoota qorannoo dabalataa 10 kenne.
Beellama har’aatin poolisiin ragaalee namaafi sanadaa walitti qabuusaa himeera.
Kana malees, shuguxii shakkamtootni iddoo itti dhoksanii akka fidan taasifamee qorachiisuun bu’aasaa argachuusaa poolisiin himeera.
Gama biraatiin, poolisiin bilbila harkaa shakkamtootaa Tajaajila Odeeffannoofi Tika Biyyaalessaaf erguun qorachiisaa akka jiruufi bu’aa isaa eegaa akka jiru himeera. Kunis wal jijjiirraa odeeffannoo isaan taasisaa turaniifi eenyu walin quunnamaa akka turan baruuf akka ta’e poolisiin himeera.
Ajjeechaa Haacaaluu booda wantoota ijoo raawwatan
Kanaafi hojiilee qorannoo birootifis yeroon qorannoo guyyoota 14 akka kennamuf gaafateera. Gama biraatin shakkamaan tokkoffaa Xilaahun Yaamii harkisaa kaateenaadhaan hidhamee tursiifamaa akka jiruufi irraa akka hiikamu mana murtichaa gaafateera.
Beellama kanaan duraa irratti poolisiin shakkamaan tokkoffaan yaalii of ajjeesuu taasisuu isaatiin harkisaa kaateenaan hidhamee akka turu taasisuu isaa himee kan ture yemmuu ta’u, dhaddacha har’aa irratti Xilaahun Yaamiin yaadicha dhiisusaa himeera.
Kana malees, shakkamaan tokkoffaafi lammaffaa ifa aduu argachaa akka hin jirreefi ifa aduu akka argatan akka taasifamu mana murtichaa gaafataniiru.
Manni murtichaa shakkamtootni ifa aduu akka argataniif kana dura ajaja kennee kan ture yemmuu ta’u, kuni maalif osoo hin raawwatamin akka hafeefi sababa shakkamaa tokkoffaarraa kaateenaan hin hiikamne bulchiinsi hidhamtootaa beellama itti aanutti dhiyaatee akka ibsu ajaja kenneera.
Dhumarrattis manni murtichaa poolisiif yeroo qorannoo guyyoota 10 kennun Hagayya 22 bara 2012ti beellama qabateera.
Ajjeechaan Haacaaluu: 'Eenyutu ajjeese, ajjeesise kan jedhu hidda qaba waan ta'eef yakka cimaadha'-Abbaa Alangaa Federaalaa
9 Adooleessa 2020
Ajjeechaan Haacaaluu Hundeessaa erga raawwate ji'a tokko keessa maaltu ta'e?